လိင်၊ လိင်၊ စာသားနှင့် SexEd - မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်မီဒီယာ (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်အပြာတွင်
FULL ဆောငျးပါးလင့်ထားသည် (PDF ဖိုင်ရယူရန်)
လိင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, sexting နှင့် SexEd: ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မီဒီယာ
ဂျိန်းဃဘရောင်း, Ph.D ဘွဲ့ကိုစာရာ Keller, Ph.D ဘွဲ့ကိုနှင့်ဇဲနာ Stern ပာ, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်
Volume ကို 16, နံပါတ် 4, 2009, စာမျက်နှာများ 12-16, Item # A164-Brown က
အစဉ်အလာမီဒီယာ (ရုပ်သံ, ရေဒီယို, ရုပ်ရှင်များ, မဂ္ဂဇင်း) နှင့်အသစ်သော, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ (အင်တာနက်ကို, ထိုကဲ့သို့သော Facebook နှင့် Myspace အဖြစ်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ဆိုဒ်များနှင့်ဆဲလ်ဖုန်း) မြီးကောင်ပေါက်အဘို့အအရေးကြီးသောလိင်ပညာပေးဖြစ်လာကြပါပြီ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မြီးကောင်ပေါက်ကိုမကြာခဏတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုထက် ပို. ကြင်နာသုံးပြီး, မီဒီယာအချို့ကိုပုံစံတွေနဲ့ခြောက်လခုနစ်ခုမှနာရီတစ်ရက်ဖြုန်းနေကြတယ်။
လေ့လာရေးအတွက်မကြာခဏထိတွေ့ခြင်း, သေးသောရိုးရာမီဒီယာအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုကနေအစောပိုင်းကလိင်ဆက်ဆံနည်းတားဆေးအသုံးပြုခြင်း, ပင်ကိုယ်ဝန်အထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှဆက်စပ်ကြောင်းပြသပါ။ အသစ်ကမီဒီယာများ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပဏာမသုတေသနမြီးကောင်ပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုဖော်ပြရန်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေထိန်းသိမ်းနည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်သုံးပြီးနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရိုးရာနှင့်အသစ်မီဒီယာလည်းအလားအလာရလဒ်များကိုနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အကြားကျန်းမာသန်စွမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်လူငယ်လိင်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့သစ်ကိုမီဒီယာသုံးပြီးဘယ်လိုကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်အလုပ်ရနိုင်ကြသည်ကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီး။